China High Quality 2aa Battery Holder ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
2AA ဘက်ထရီပိုင်ရှင်သည် AA သာမန်ဓာတ်ခဲ (သို့) အားပြန်သွင်းနိုင်သောဓာတ်ခဲနှစ်လုံးကိုကိုင်နိုင်သည်။ သာမန်ဘက်ထရီများသည် 3.0V ဗို့အားကိုထုတ်နိုင်ပြီးအားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီများသည် SCM စနစ်၊ Arduino စနစ်၊ အခြားအသိဥာဏ်ကားများ၊ ခြေရာခံကားများအတွက်သုံးနိုင်သည်။
2aa ဘက်ထရီလက်ကိုင်၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
Keyu အမှတ်တံဆိပ် 2AA ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူကို ၁၀၀% ကောင်းသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုသုံးပစ္စည်းများနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
2aa Battery Holder ၏ ၂. Product Parameter (Specification)
ထုတ်ကုန်အမည် 2aa ဘက်ထရီလက်ကိုင် (အဆက်အသွယ် pin)
၁။ ဤ 2AA ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည် ၃.၀v ဘက်ထရီကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်
2aa Battery Holder ၏ 4. Product Details
2aa Battery Holder အသေးစိတ်
ကိုင်ဆောင်သူ: Polypropylene; နွေ ဦး: 0.7mm ဂီတဝါယာကြိုးနီကယ်ချထားတဲ့; PC terminal များ: 0.8mm music wire nickle plated ။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 2AA ဘက်ထရီပိုင်ရှင်
2aa Battery Holder ၏ထုတ်ကုန်အရည်အချင်း ၅
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ 2aa Battery Holder အားလုံး
2aa Battery Holder ၏ ၇။ အမေးအဖြေများ
hot Tags:: 2aa ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်သူ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သူ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်